DEG DEG: Wararkii ugu dambeeyey Shirkii ka socdey Garowe Warar sheegaya inuu maraayo meel xasaasiya shirar… - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada DEG DEG: Wararkii ugu dambeeyey Shirkii ka socdey Garowe Warar sheegaya inuu...
DEG DEG: Wararkii ugu dambeeyey Shirkii ka socdey Garowe Warar sheegaya inuu maraayo meel xasaasiya shirar…
Garowe (Banaadirsom)-Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa sheegaya in ay xalay madaxda Soomaalida ee kushirsan magaaladaas ay yeesheen mid kamid ah kulamadii ugu adkaa oo ay uga wada hadleen arrimaha horyaala.
Kulanka oo saacado badan qaatay xalay, waxaa aad looga hadlay is mari-waaga taagan iyo sidii xal kama dambeys ah loo gaari lahaa, xili ay dhinacyadu kala wataan sharuudo waa weyn oo kala adag.
Wararku waxay sheegayaan in ay madaxda dawladda Faderaalka ku adkeysanayaan damacooda ku wajahan in ay leeyihiin talada ugu dambeysa ee dalka, isla markaasna aysan jirin wadiiqo u furan dawlad gobaleedyada.
Maamul gobaleedyada ayaa xooga saaraya in aysan marnaba sharciyad gaar ah lahayn dawladda Faderaalka, ayna wax ku tahay Iyaga, taasna loo baahan yahay in talada dhulka la dhigo oo ay dhinacyada oo dhan qeyb ka noqdaan.
Ma jiraan wax heshiis ah oo ilaa hadda la gaaray, waxaana maanta adag in uu shirku sii socdo, isagoo galaya maalintii 5aad oo aysan jirin wax horumar ah oo la sameeyey.
Wakiilada beesha Caalamka ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelan doonaan kulanka, haddii uusan soo dhamaan maanta galinka hore, waxaana adag in uu dhamaado.